Qalab caafimaad oo lagu wareejiyay maamulka Ximan iyo Xeeb +SAWIRRO | idalenews.com
Home Idale Somali News Update Qalab caafimaad oo lagu wareejiyay maamulka Ximan iyo Xeeb +SAWIRRO
Munaasabadda qalabkan caafimaad lagu gudoonsiinayay maamulka Ximan iyo Xeeb ayna ka qeyb galeen mas’uuliyiin ka mid ah maamulka, agaasimaha guud ee mu’asasada waxbarashada iyo hormarinta ee Iftiin, qurbajoog iyo qaybaha kale ee bulshada, waxaana saaka lagu qabtay xarunta dugsiga sare ee Iftiin.
Agaasimaha guud ee mu’asasada waxbarashada iyo hormarinta Iftiin Cusmaan Macalin Xassan Geelle oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxaa uu sharaxaad ka bixiyay agabkan caafimaad iyo qaybaha uu ka kooban yahay, isagoo sheegay in ay isugu jiraan Sariiro, qalabka qaliinka, Bareelayaal, Gawaarida cuuryaanka, Dharka dhaqaatiirta iyo qaybo kale.
Dr Daahir Cali Abtidoon agaasimaha Isbitalka dhexe ee dagmada Cadaado oo maamulku u wakiishay inuu qalabkan caafimaad deegaanka kala gaarsiiyo ayaa gudoomay qalabka, waxaana uu sheegay inuu yahay mid ay aad ugu baahnaayeen, isagoo balan qaaday inay si siman bulshada ugu adeegi doonaan.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Ximan iyo Xeeb Cumar Maxamed Diiriye ayaa isna ka hadlay munaasabadda, isagoo sheegay inay Mu’asasada Iftiin ay ku qiimayn doonaan waxqabadkooda.
Ugu dambayn Guddoomiyaha Baarlamanka maamulka Ximan iyo Xeeb C/llahi Faarax Sandheere ahna ku simaha madaxwaynaha ayaa soo gabangabeeyay munaasabadda, waxaana uu u mahad celiyay hay’adda qalabkan deegaanka soo gaarsiiyay.
Qalabkan caafimaad oo gaaraya ilaa hal Kontineer oo 40 tan ah ayaa waxaa la rajanayaa in la wada gaarsiiyo Isbitaalada ku yaal Ximan iyo Xeeb, waxaana bahda caafimaadku ay sheegeen in ay sare u qaadi doono tayada caafimaadka deegaanka.
Previous articleMunaasabad isdhexgalka Bulshada ah oo xalay lagu qabtay degmada Yaaqshiid
Next articleNin Chinese ah oo Aduunka Baaskiil kusoo maray oo gaaray Soomaaliya + SAWIRRO